यी राशिलाई आजको दिन शुभ : २०७६ चैत १६ गतेको राशिफल – Sagarmatha Online News Portal
यी राशिलाई आजको दिन शुभ : २०७६ चैत १६ गतेको राशिफल
आज वि.सं. २०७६ चैत १६ गते आइतवार । तदनुसार इ.स. २०२० मार्च २९ तारिख । ने.सं. ११४० चौलाथ्व । चैत्र शुक्लपक्ष, पञ्चमी, २२ः३० उप्रान्त षष्ठी ।
खर्चको जोहो गर्न अलि दौडधुप गर्नुपर्ला । अवसरको खोजीमा आफन्त र परिवारबाट टाढिनुपर्ने हुन सक्छ । छर–छिमेकमा असमझदारी बढ्नेछ । व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने समय छ । पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ने हुन सक्छ । उधारोमा व्यापार गर्नुपर्ला । खर्च लागे पनि दिगो काम फेला पर्न सक्छ । चुनौती पन्छाउँदै रोकिएका काम सम्पादन गर्न सकिनेछ ।
आँटले काम बन्नेछ भने आम्दानीले उत्साह जगाउनेछ । श्रमको उचित मूल्यांकन हुनाले राम्रै प्रतिफल हातलागी हुनेछ । व्यापारमा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ । सट्टापट्टा, लेनदेन आदिमा मनग्गे फाइदा हुनेछ । मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ । विभिन्न स्रोत–साधन जुट्नेछन् । अड्किएको रकम उठ्नेछ र धन संग्रह पनि हुनेछ । थन्किएका वस्तुको उपयोग हुनेछ ।
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ । समुदायको हितमा राम्रै काम गर्न सकिनेछ । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै परोपकारी काम सम्पादन गर्ने समय छ । प्रयत्न गर्दा आफ्नो वर्ग वा क्षेत्रको नेतृत्व हातलागी हुनेछ । सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् । लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ । तारिफयोग्य कामले लोकप्रियता दिलाउनेछ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा हातलागी हुनेछ ।
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। अध्ययनमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ । बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ । प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ । फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै पछि फाइदा हुने काम हात पार्ने मौका छ । गुरुजनको सुझाव र सन्तानको सहयोग लाभदायी बन्नेछ । मिहिनेतले सफलता दिलाउनेछ ।
राशिफलले जेसुकै भनेपनि तपाई कर्ममा विश्वास गर्नुस । निरन्तर कर्म गर्नुस । एक दिन अवश्य सफलताले तपाईको पाउ चुम्नेछ ।